I-Rustic enamagumbi amabini okulala kwiNkosana-Indlu, iSetting yabucala
Ikhabhinethi ethe cwaka kakhulu/i-cottage ivakala endlini. Ikhaya lihlala kude kakhulu nendlela kwindawo yabucala kunye neyasemaphandleni. Ifakwe kwindawo enemithi entle enemfihlo macala onke. Ipropathi entle enendawo yepatio yangaphandle yokuhlala ngaphandle kwaye wonwabele indalo kamama. Imizuzu eli-13 ukuya e-Elk Mountain Ski Resort, ukuhamba imizuzu emi-5 ukuya kwi-Rails kunye nenkqubo yeetreyile zabantu bangaphandle kunye neendawo ezininzi zeMidlalo ezikufutshane. Ibekwe ezantsi kwendlela esuka kwifama yaseFiddle Lake kunye nechibi kuyo nayiphi na iminyhadala yendawo.
Ikhaya lethu liziva limnandi kwaye lisekhaya. Umgangatho ongezantsi wekhaya uvulekile olungele ukonwabisa kunye nokuhlala kunye neentsapho. Kumgangatho ongezantsi kukho ikhitshi kunye negumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye negumbi lokuhlambela. Kumgangatho ongaphezulu kukho ihafu yokuhlambela kunye namagumbi amabini okulala. Igumbi elinye kuphela (igumbi likaKumkanikazi) elinokufikelela kwindawo yegumbi. Ikhaya alinayo i-air conditioning kodwa ubusuku obuninzi basehlotyeni buhlala bupholile kakhulu ngokusekelwe kumphakamo. Omabini amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlala linabalandeli besilingi. Kukho ubushushu obusembindini kwakunye nesitovu esikhulu seenkuni esilungiselelwe ixesha lasebusika. Asiboneleli ngeenkuni zesitovu kodwa ezinokuthi zithengwe ekuhlaleni eArlo's (iVenkile Jikelele ngaphakathi kwemizuzu emi-5). I-Wi-Fi yasimahla enegama lokugqitha elibhalwe ngaphezulu kwesofa kwigumbi lokuhlala.
Kukho indawo enkulu yepatio yangaphandle enegrill yamalahle kunye ne-flattop gas grill. Ipatio yangaphandle ikwabandakanya indawo eninzi yokuhlala kunye nendawo yokutyela. Kukho ishawari yangaphandle ebekwe ecaleni kwendlu enamanzi ashushu nabandayo akhoyo ngeenyanga zasehlotyeni. Ngaphandle yindawo yabucala kakhulu enemibono yeentaba xa uhleli kwindawo yepatio. Indawo enengca inkulu kakhulu kwaye ibandakanya iindawo ezithile zegadi ngokunjalo ukuba zonwabele. Indawo yomlilo enkulu yangaphandle ibekwe kwindawo enengca kwaye yindawo entle yokujonga iinkwenkwezi. Zininzi izilwanyana zasendle ezindwendwela indawo yethu kodwa nceda uhlale ukhumbula ukuba ibhere elimnyama lundwendwe ngokunjalo. Nceda ugcine konke ukutya kunye nemveliso yenkunkuma ngaphakathi.
Indawo yethu ayiphawulwanga ngokucacileyo kodwa nceda uhlale kwindawo enengca ejikeleze indlu echetyiweyo kwaye ecaleni kwendlela kuphela. Sicela ukuba siyihloniphe eyethu kunye nepropathi yommelwane wethu ke ngoko nceda ungangeni kwiindawo ezinemithi okanye ibala elikhulu elisecaleni komnyango wethu wangaphambili kufutshane neshedi / ishedi.
Asikuvumeli ukuzingela okanye ukusetyenziswa kwe-ATV/Snowmobile kwipropati yethu.
Sifumana ikhephu elinzima kunye nemozulu yasebusika kwindawo yethu. Ngexesha lesiganeko sekhephu, sincoma isithuthi se-4WD njengoko i-driveway yethu inde kakhulu kwaye isenokungalinywa ngokukhawuleza. Ukuba kukhithika ngexesha lotyelelo lwakho, kuya kufuneka ube noxanduva lokuhlambulula indlela yokuhamba njengoko umqhubi wethu wekhuba engayi. Umhlakulo wekhephu unikiwe.
Ibekwe ecaleni kwendlela ezolileyo yasemaphandleni. Ifakwe phakathi kwemizuzu emi-5 yivenkile encinci jikelele kunye nesikhululo segesi esinendawo yokutyela ekwindawo ebizwa ngokuba yiArlo's. Ivenkile yegrosari ikufutshane malunga nemizuzu engama-20.
Eli likhaya lesibini kuthi kwaye asihlali kufutshane. Ukuba kukho nantoni na oyifunayo, nceda ufikelele kuthi kwaye siya kuzama ukukunceda ngayo nayiphi na indlela.